EMUI 10: သင်၏ Huawei ဖုန်းထဲသို့ beta ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း Androidsis
Huawei သည်မကြာသေးမီကစတင်ခဲ့သည် ၎င်း၏ operating system ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း၏ beta ကိုဖြန့်ကျက်။ ငါတို့ပြောတာ EMUI 10Android 10 ကိုအခြေခံထားသည့်သုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်သည်၎င်းအမှတ်တံဆိပ်၏ထုတ်ကုန်များစွာသို့ရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပြproblemနာကသင်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားရန်သင်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းရန်လိုသည်။
ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါ။ နောက်ပြီးဘယ်လို download လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုပြပေးပါမယ် EMUI beta ကို 10 သငျသညျကပထမ ဦး ဆုံးအသုံးပြုရန်တို့တွင်ဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်အောင်အမြန်ဆုံး။ တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်လား။ Huawei ဖုန်းရှိသည်။ ၎င်းသည်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ၏လည်ပတ်မှုစနစ်နှင့် ၄ င်း၏ဖုန်းအမျိုးမျိုးအတွက်သဟဇာတဖြစ်သည်။
ဤရွေ့ကားသင်အခြားမည်သူမဆိုမတိုင်မီသင် EMUI 10 ကိုစမ်းသုံးနိုင်သည့်ဖုန်းများဖြစ်သည်
ဟုတ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးဖုန်းတွေဟာအောက်တိုဘာလမှာလည်ပတ်လည်ပတ်မှုစနစ်ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုစတင်လက်ခံလာကြတာအမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပစ်လွှတ်မှုအကြောင်းပြောနေတာဆိုတော့ဒါကသင့်ရဲ့ terminal မှာရမယ့်တိုင်အောင်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်တွင် Honor 9X ရှိပါကဒီဇင်ဘာလအထိစောင့်ရမည်။ သင် beta ပရိုဂရမ်ကိုစာရင်းသွင်းမထားပါကနောက်မှသင်ကိုသင်ကြားပေးမည်ဖြစ်သည်။
နိုင်ဖြစ်ဖို့ခြေလှမ်းများကိုအောက်ပါမီ သင်၏ဖုန်းတွင် EMUI 10 ကိုထည့်သွင်းပါ။ အောက်ဖော်ပြပါစာရင်းထဲမှမိုဘိုင်းဖုန်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကိုသင်သတိရသင့်သည် -
Huawei P30 နှင့် Huawei P30 Pro
Huawei Mate 20 နှင့် Huawei Mate 20 Pro တို့ဖြစ်သည်
Huawei P20 နှင့် Huawei P20 Pro
Huawei ကအိမ်ထောင်ဖက်သည် RS
ဂုဏ်ပြု 20 နှင့် 20 ဂုဏ်ပြု Pro ကို
Huawei Mate 10 နှင့် Huawei Mate 10 Pro တို့ဖြစ်သည်
Huawei ကအိမ်ထောင်ဖက် Lite ကို 10
Huawei က Nova 4
ဂုဏ်အသရေ 20 Lite ကို
Honor 9X နှင့် Honor 9X Pro တို့ဖြစ်သည်
ဤစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သောဖုန်းများမှသင့်တွင်ဖုန်းရှိပါကအခြားမည်သူ့ကိုမှသင် EMUI 10 ကိုစမ်းသပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ပထမအဆင့် Huawei interface ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရန်အတွက်လိုအပ်သော application ကိုသင်၏စမတ်ဖုန်းထဲသို့ကူးယူပါ။ ဒီ link ကတဆင့် မင်းလုပ်နိုင်တယ်။ သင်မသိသောမူရင်းအသုံးချပရိုဂရမ်များတပ်ဆင်ရန်သင်လိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်ကိုပေးရမည်ကိုသတိရပါ။
စိတ်ပူစရာမလိုပါ၊ beta testers များအတွက်တရားဝင် Huawei အက်ပလီကေးရှင်းသည်အခြားမည်သူ့ကိုမဆို EMUI ၏ပထမဆုံးမူကွဲများကိုစမ်းသပ်ရန်ဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာကိုသွင်းပြီးသည်နှင့်သင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပြင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလက်ခံသည်။ ထိုသို့လုပ်ရန်သင့်တွင်အကောင့်တစ်ခုရှိရမည် Huawei ID။ သင်၌မရှိလျှင်၎င်းကိုသင်တိုက်ရိုက်လုပ်နိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏အီးမေးလ်အကောင့်ကိုသာထည့်ရန်လိုအပ်သည်။
နောက်တစ်ဆင့်မှာ EMUI 10 beta ပရိုဂရမ်တွင်ပါ ၀ င်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်မီနူးရှိ“ Personal” ရွေးစရာကိုရွေးပါ၊ “ စီမံကိန်းမှ Join” သို့ သွား၍“ ရရှိနိုင်သည့်စီမံကိန်း” ကိုရှာပါ။ EMUI 10 ကိုသင်၏ဖုန်းတွင်ရရှိနိုင်သည်ကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်၊ အထူးသဖြင့်သင့်တွင် Huawei P30 ကဲ့သို့ပုံစံအသစ်ရှိပါက။
ဤကိစ္စတွင်သင်လုပ်ရန်အားလုံးသည်ခွင့်ပြုမည့် OTA မှတစ်ဆင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းအကြောင်းကြားစာကိုလက်ခံရန်နှင့်စောင့်ဆိုင်းရန်ဖြစ်သည် EMUI 10 ကို install လုပ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ beta အကြောင်းပြောနေတယ်ဆိုတာသတိရပါ၊ ဒါကြောင့်ဒီ operating system ဗားရှင်းဟာတည်ငြိမ်မှုပြproblemsနာတွေရှိနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်တခြားသူတွေရှေ့မှာကြိုးစားရကျိုးနပ်တယ်မဟုတ်လား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Huawei » EMUI 10 beta ကိုအခြားမည်သူ့ကိုမဆိုစစ်ဆေးနည်း
Gabriela lagunes ဟုသူကပြောသည်
Gabriela Lagunes သို့ပြန်သွားပါ
Pedrinho ။ ဟုသူကပြောသည်
Huawei Mate 10 Lite နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါသလား။ သေချာလား? ကျွန်တော် Oreo version 8.1 ကိုတောင် update မလုပ်ရင်ပေါ့။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၄ ရက်တွင် Pie4haha ​​ကိုပင်ထုတ်မထုတ်တော့ပေ။
Nerea Pereira ဟုသူကပြောသည်
သင်၏ EMUI 10 ဖုန်းကိုနို ၀ င်ဘာလတွင်ရရှိမည်ဟုအတည်ပြုသည့်ဆောင်းပါးသည်ဤတွင်ပါ။ beta ကိုမရရှိနိုင်ပါ၊ စိတ်ရှည်ပါ။
Nerea Pereira အားပြန်ပြောပါ
ငါ p20 Lite ကိုအတူတူ, fuck ဆိုတဲ့ blowjobs ရ
မိတ်ဖက် 10 lite, သဟဇာတမဟုတ်! ကျွန်ုပ် install လုပ်ပြီးသောစီမံကိန်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ရရှိသည်!
လူးဝစ် Gerardo ဟုသူကပြောသည်
လူးဝစ် Gerardo ကိုတုံ့ပြန်ပါ
Huawei အိမ်ထောင်ဖက် ၂၀ မှာပါ။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်၌ Huawei P20 lite ဆဲလ်ဖုန်းရှိသလား၊ သိလိုသည်မှာဤ update ၏ဤစာရင်းတွင်မရှိပါ၊ ၎င်းကိုယခုဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူနိုင်သည် (သို့) သင်စာရင်းထဲတွင်ပေါ်လာရန်သင်စောင့်ရမည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Marco Sangurima ဟုသူကပြောသည်
မှားယွင်းသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုအလေးအနက်ထားသင့်ပြီး Huawei သုံးစွဲသူများအားလမ်းလွဲစေသင့်သည်
Marco Sangurima အားပြန်ပြောပါ
Hoa Jorge, သင်ကသင့်ရဲ့ဖုန်းမော်ဒယ်ယခုအချိန်တွင် EMUI 10 ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေကတည်းကသင်ကရရှိနိုင်ပါသည်စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
ထိုအ p8lite, huawey y6 2018 ဘာဖြစ်သွားမလဲ
Luis Javier Alfaro Rojas ဟုသူကပြောသည်
Huawei mate 20 lite ကောဘာလို့စာရင်းထဲမှာမတွေ့ရတာလဲ ????
Luis Javier Alfaro Rojas ကိုပြန်ပြောပါ
Huawei mate 10 Lite သည်သဟဇာတဖြစ်သော်လည်းရှားပါးသည်။ ၎င်းသည် ecibocasion ဖြစ်သည်
ငါ၌ P20 ရှိပြီး EMUI 10 beta ရပြီးဖြစ်သည်။ ငါမှတ်ပုံတင်ရန်ကြိုးစားသောအခါ“ ခဏလေးဒီ IMEI NUMBER ကိုဖြတ်ပြီးဒီစီမံကိန်းကိုသင်ပူးပေါင်းပြီးပြီ” လို့ငါ့ကိုပြောလိုက်သည်။ "ဒီကိရိယာနဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုသင်ပါ ၀ င်နိုင်တယ်" ငါ REGISTER ကိုနှိပ်လိုက်ရင် "ပရောဂျက်နဲ့မဆက်သွယ်နိုင်ဘူး" လို့ပြောတယ် ဒီဟာတစ်စုံတစ်ယောက်ဖြစ်ပျက်လား ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!